माउण्ट कप ! छात्रातर्फ महेन्द्ररत्न मावि फाइनलमा प्रवेश | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर खेल समाचार माउण्ट कप ! छात्रातर्फ महेन्द्ररत्न मावि फाइनलमा प्रवेश
माउण्ट कप ! छात्रातर्फ महेन्द्ररत्न मावि फाइनलमा प्रवेश
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २२:५२
युवा रेडक्रस सर्कल माउण्ट एभरेष्ट आवासीय माध्यमिक विद्यालयको आयोजनामा भइरहेको जिल्लास्तरीय अन्तरमावि छात्रछात्रा नवौं माउण्ट कप भलिबल प्रतियोगिताको एक खेल बाहेक सेमिफाइनलका खेल सकिएका छन् । प्रतियोगिताको शनिबार भएको खेलमा छात्रतर्फ प्रकाश माविले म्याग्दी एकेडेमी र आयोजक माउण्ट एभरेष्टले महेन्द्ररत्न माविलाई पराजित गदै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्रकाश माविले सोझो सेटमै म्याग्दी एकेडेमीलाई पराजित गरेपनि माउण्ट र महेन्द्ररत्न विच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
वेष्ट अफ ५ मा महेन्द्ररत्नलाई उछिन्दै माउण्टले फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो । उता छात्रातर्फ महेन्द्ररत्न मावि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सेमिफाईनलमा न्यू वेष्ट पोइन्ट आवासिय माविलाई पराजित गदैं फाइनलमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ ।
छात्रातर्फको सेमिफाइनलको एक खेल समय अभावका साझँ परेपछि एक–एक सेट जितेपनि स्थगित भएको थियो । स्थगित खेल माउण्ट र सरस्वती मावि तातोपानीको आइतबार विहान हुने विद्यालयका सञ्चालक तथा निर्देशक राजु केसीको जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा छात्रतर्फ १२ र छात्रातर्फ विभिन्न ७ ओटा विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगिताबाट छात्रतर्फ प्रथम र द्वितीय हुनेले क्रमशः ३५ हजार, २० हजार र रनिङ शिल्ड, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी छात्रातर्फ प्रथमले २० हजार नगदसहित रनिङ शिल्ड, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र एवं द्वितीयले १० हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पार्नेछन् ।
विद्यार्थीमा खेल रुची जगाउन स्पोर्ट्स क्लव गठन
मोनाको वडा तथा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता गरिने, फाइनल घोरेपानीमा हुने
अन्तरमावि छात्रछात्रा भलिबलको उपाधी प्रकाश मावि र माउण्ट एभरेष्टलाई